Mac Otakara anosimbisa kuti iyo iPhone 7 ichave iine Smart Connector | IPhone nhau
Mac Otakara anosimbisa kuti iyo iPhone 7 haizove ne3.5mm port uye ichave ine Smart Connector
Kubva pamakuhwa anotenderera nezvake iPhone 7Anonyanya kukakavara hapana mubvunzo kusavapo kweiyo 3.5mm headphone chiteshi. Dzimwe dzakawanda runyerekupe dziri kutenderera, senge iyo ichave iine mbiri kamera (ingangoita yakasarudzika Plus modhi) kana kuti iyo dhizaini ichave yakafanana neiyo yeiyo iPhone 6 / 6s. Kune zvakare runyerekupe runyerekupe rwekuti inotevera iPhone ndichave ne Smart Connector. Mac Otakara, bhurogu yeJapan yakabudirira kubuditsa nhau zhinji, yaizosimbisa yekutanga neyekupedzisira yeguhwa rataurwa pamusoro apa.
Wakazviita mukati kupinda pane yako blog iyo yakanyorwa se "runyerekupe", chimwe chinhu chine musoro tichifunga kuti hapana chakasimbiswa 100% kusvika panguva yekuratidzwa kwayo kuruzhinji. Chinhu chekutanga Mac Otakara inotaura nezve iyo 3.5mm chiteshi uye simbisa kuti ichave isipo pane iyo iPhone 7. Apple yaigona kubheja maMheni kana mahedhifoni eBluetooth uye, sekumwe kuongorora kwandakaverenga, inotarisira kusimudzira ruzha urwo runowanikwa ne smartphone yayo parizvino.
1 Iyo iPhone 7 haizove ne3.5mm headphone port
2 IPhone 7 ine Smart Connector?
Iyo iPhone 7 haizove ne3.5mm headphone port
Runyerekupe runovimbisa kuti iyo Makaralı EarPods iyo Apple ichatanga ichabhadhariswa kubva kuMwenje chiteshi cheiyo iPhone, chimwe chinhu chinoita senge hachina kunyanya kubudirira kunze kwekunge vavandudza kuzvimiririra kwechigadzirwa. Aya mahedhifoni angabhadhariswa nenzira yakafanana neApple Penzura iyo inogona kubhadhariswa kwehafu yeawa ine 15s chete ekubatanidza kune iyo iPad.
IPhone 7 ine Smart Connector?
Midhiya yeJapan yaizosimbisawo kuti iyo iPhone 7 ichauya ne Smart Connector uye inotenda kuti ichashandiswa kugadzirisa iyo Smart Keyboard. Nechunongedzo ichi unogona kushandisa zvimwe zvishongedzo, zvakadai semahombekombe akangwara ayo angawiriraniswa neiyo iPhone nekukurumidza kana iwe uchinge waapfeka. Chero zvazvingaitika, isu tichiri kufanirwa kumirira kuti tione kana runyerekupe urwu rukasimbiswa uye izvo Apple iri kuronga kushandisa ino smart chinongedzo pane yayo inotevera iPhone. Iwe unofungei kana chii chaunofunga kuti chingashandiswe?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Mac Otakara anosimbisa kuti iyo iPhone 7 haizove ne3.5mm port uye ichave ine Smart Connector
Zvakanaka, zvaramba zvakadaro handizive ... .. dodgy uye kunyanya nebhena rinogara riripo richipa ...
Chinja ndapota, pane zvirinani zvirinani kupfuura izvi.